Yaa ku gacan siiyay Dowladda Soomaaliya in deymaha uu ka cafiyay Bankiga horumarinta Afrika? - BANDHIGA
Yaa ku gacan siiyay Dowladda Soomaaliya in deymaha uu ka cafiyay Bankiga horumarinta Afrika?
Bangiga hormarinta Afrika (AFDB) ayaa 122.55 Milyan oo doolar oo aheyd deyn uu kulahaa Soomaaliya ka saamaxay, kadib markii ay lacagtaas bixiyeen Boqortooyada Ingriiska iyo wadamada ku bahoobay Midowaga Yurub, sida lagu cadeeyey warsaxaafadeed kasoo baxay Bangiga Afirka oo lagu sheegay inay astaan u atahy dhamaadka cunaqabateynta iyo bilaabashada wadashaqeynta Bangiga Hormarinta Afrika iyo Soomaaliya.
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane C/raxmaan Ducaalle Beyle ayaa sheegay in Bankiga horumarinta Afrika uu cafiyey deyntii Soomaaliya uu ku lahaa, kadib dadaal dheer oo dawladda ay ku sameysay hagaajinta hanaanka maamulka Maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka.
Sidoo kale Ra’isul Wasaare Kheyre ayaa soo dhaweeyay deyn cafinta.
Extremely grateful to my colleague & friend @KGeorgieva Appreciate her taking the time to call me at the conclusion of the IMF board meeting on #Somalia confirming the news that we have all been waiting for, Somalia has reached Decision Point subject to executions tomorrow pic.twitter.com/o3KfcRbaXY
— Hassan Ali Khaire (@HassanAKhaire) March 24, 2020
By : Press room Tags: Kaalin nuucee ayey ka qaateen UK iyo EU deymaha uu ka cafiyay Soomaaliya Bankiga horumarinta Afrika
Wasaaradda caafimaadka oo soo saartay 7 Qodob oo digniin iyo talooyin isugu jira kuna socda dadka safra
Puntland oo ka laabatay go’aan ay horay u qaadatay oo la xiriiray ka hor taga Coronovirus